အတူတူနေကြတဲ့အခါ | U.N.O.B
ကျနော်အပါအ၀င် မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုက အစမှာ အရမ်းကောင်းတတ်ပြီး ကြာလာရင်အချင်းချင်း အပြစ်မြင်လာကြပြီး စည်းလုံးမှု မရှိကြတော့တာပါဘဲ။
စည်းလုံးမှုမရှိတာထက် ဆရာအတင်မခံချင်ကြတာက ပိုများမယ်ထင်တယ်။ မရှိသင့်တဲ့မာနတွေရှိတတ်ကြပြီး မယောင်ရာဆီလူးတတ်ကြပါတယ်။ အလုပ်ကို တကယ်လုပ်တာထက် လူကြီးရောက်လာမှ မျက်နှာသာရအောင် လုပ်ပြတတ်တာ များပါတယ်။ စေတနာနှင့်လုပ်ရမဲ့အလုပ်ကို မာနတွေတစ်သီကြီးနဲ့ ဟန်ပါပါ မာန်ပါပါ မဏ္ဍပ်တိုင်တက်ပြပြီး ငါတကောလုပ်ပြတတ်ကြတာလဲ ဒုနဲ့ဒေးပါဘဲ။ ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်တာထက် နာမည်ရချင်တာက ပိုများတတ်ပါတယ်။ တာဝန်ကို ခေါင်းရှောင်တတ်ပြီး အခွင့်အရေးကို လုယူတတ်ကြသူတွေလဲ မမြင်ချင်အဆုံးမဟုတ်လား။
ကိုကိုမောင် (ပန်းရနံ့ )
Than Naing April 24, 2010 at 10:47 am Reply
‘ အတူတူနေကြတဲ့အခါ ‘ ဆိုတဲ့ ဒီစာကိုဖတ်လိုက်ရတဲအချိန်မှာ ကျနော့်စိတ်ထဲတွေးမိလိုက်တာက ‘ လူတွေဟာ ကိုယ်လုပ်(ကိုယ်ကျင့်သုံး)ရမှာကိုမလုပ်ပဲ တစ်ခြားလူကိုလုပ်ခိုင်း(ဆရာလုပ်)တယ်လို့ထင်မိသွားပါတယ်။ သင်္ချာသဘောအရဆိုရင်လဲ အတူတူနေကြတဲ့သူတွေမှာ ဒီလိုကောင်းတဲ့အကျင့် ကျင့်သုံးတဲ့သူကအမြဲရှုံး(အခွင့်အရေး)ပြီး၊ ဒီကောင်းတဲ့အကျင့် မကျင့်သုံးတဲ့တစ်ဖက်လူကအမြဲအသာစီးရ(အကျိုးအမြတ်)တာမျိုး ဖြစ်တတ်လို့ပါ။
‘ အတူတူနေကြတဲ့အခါ ‘ ကို အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ စာရေးတဲ့ကိုကိုမောင် က ရိုးရိုးသားသားစေတနာနဲ့ ကောင်းတဲ့အသိသုတကို ဝေမျှထားတာကိုသိမြင်လာပါတယ်။
ဘာသိဘာသာမနေခဲ့ပဲ သတိပေးဝေဖန်စာရေးခဲ့တဲ့ ကိုမျိုးထွန်း (LA) ကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Myo Tun February 10, 2010 at 11:28 pm Reply
Website တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာလဲ ခက်သား၊ တစ်ခါလာလဲ အကြောင်းအရာ အသစ်မရှိ၊ နောက်တစ်ခါလာလဲမရှိ၊ ခြောက်ကပ်နေမှာပေါ့၊ ကျွန်တော်တို့ Community အတွက် သင့်တော်မယ်ထင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေဆိုရင် အရိုးသားဆုံး တွေးပြီးရေးပါ၊ ဖေါ်ပြပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကြိုဆိုပါတယ်၊ ကျွန်တော့်လိုပဲ သူငယ်ချင်းတွေလဲ ရှိပါတယ်။ မတူဘူးဆိုတဲ့သူတွေလဲ ရှိနေမှာပါပဲ။ အခု အပေါ်မှာ Comment Section မှာရေးထားတဲ့ သူများကိုလဲ လေးစားပါတယ်။ အတွေးအခေါ်မတူတာကို မျက်စေ့ စုံမှိတ်ပြီး ဘူးခံငြင်းနေတာမဟုတ်ပဲ အကျိုးနဲ့ အကြောင်း ဘာကြောင့်လဲဆိုတာမျိုး ဝေဖန်ထောက်ပြထားရင် ဆွေးနွေးမှုဟာ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်၊
သာမာန်လူတွေမပြောနဲ့ ပညာရှင်များတောင်မှ “သတိမမူ ဂူမမြင်” “ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲ” စတဲ့ နိတိတွေနဲ့ သတိချပ်နေရချိန် ကျွန်တော်တို့ တွေမှာ ပိုပြီးတော့ မေ့လျောမှုတွေ မဆင်ခြင်မှုတွေ ပိုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ လမ်းဆုံတိုင်းမှာ “STOP” ဆိုတဲ့ဆိုင်း ဘာလို့ချိပ်ထားတာလဲ၊ ကျွန်တော်တို့တွေ လူကြီးတွေ၊ သိပြီးသားတွေပဲ ချိပ်စရာမှ မလိုတာ၊ NO.. သတိချပ်စေချင်လို သတိပေးထားတာပါ။ အခု ကိုကိုမောင်ဆိုတဲ့ သူ ရေးထားတဲ့ထဲမှာလဲ အတွေ့ အကြုံအရ သတိချပ်စေချင်လို့ စေတနာနဲ့ ရိုးရိုးသားသား ရေးထားတာပဲလို မြင်ပါတယ်။
အလုပ်အကိုင်တွေ မအားလပ်တဲ့ကြားက လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ စေတနာအရ လုပ်နေကြတဲ့ ဒီအဖွဲ့မျိုးကို ကျေးဇူးတင် အားပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ အပျက်ဖက်က မမြင်ပဲ၊ အပြုသဘော အဖြစ်သဘောနဲ့ တစ်ဦးကို တစ်ဦး လေးလေးစားစား ဆွေးနွေးကြရင် ပိုပြီး OK ဆိုပြေမှာပါ။ Idea မရှိပဲ အပျက်ဖက်က လိုက်ပြောနေတဲ့ သူတွေကိုလဲ မေ့ထားလိုက်လို့ရပါတယ်။ သြော် သူတို့ မှာ ဒီလောက် အတွေးအခေါ် မရှိရှာ လို့ပဲလေဆိုပြီး ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါ။
ကိုသာအေးပြောတဲ့ လောကနိတိထဲမှာ စေတနာဆိုတာ ရောင်ပြန်ဟပ်တယ် ဆိုတာ ပါပါတယ်။ အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါ။ အပြုအဘောဆောင်တဲ့ အကျိုးရှိတဲ့ စာတိုင်းကို ဖတ်ဖို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
Thar Aye February 9, 2010 at 11:29 pm Reply
Hey, K k Mg
Is it funny story or bossy story or what? If you write with your own idea, keep it up, one day you’ll be good writer. Otherwise, we have LAW KA NI Teat to read, only we need to follow them.
PS: by the way, T Naing you are very good, better than Nwe Ja Thine.
Than Naing February 8, 2010 at 1:28 pm Reply
ဒီစာကိုဖတ်လိုက်ရတော့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ဘယ်သူက ဘာကြောင့် ဘယ်သူ့ကိုပြောတာ (သို့မဟုတ်)ဆုံးမတာလဲ?
ဒီစာရေးတဲ့လူဟာ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ယူဆရလို့ပါ။
ဒီစာမျိုးက အသက် သိက္ခာ သီလ သမာဓိ ပညာ တခုခုကြီးမြတ်တယ်လို့ အများကလက်ခံထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များက တဦးချင်းကို၎င်း အစုအဖွဲ့ကို၎င်း အသိပညာပေးတာ ဆုံးမတာမျိုးဆိုတော့၊ Communityမှာဘာသတင်းလေးများထူးလဲလို့ Websiteလာကြည့်ပါတယ် ဘာရနံ့ကလာအငြိုငြင်လာပေးနေတာလဲလို့ ကျနော်လိုဘဲထင်သွားနိုင်တယ်။
၀တ္ထုတိုလို ဆောင်းပါးလိုကကောင်းပါတယ်။ Websiteပေါ်ကဆုံးမတာက မကောင်းဘူးထင်တယ်။
ဒီမှာရေးထားတာတွေက လူအများသိပြီးသားတွေပါ။ လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့လူဖြစ်ဖို့ဘဲလိုတာပါ။ ဒီစာရေးတဲ့လူက ဒီအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ လူ့ပြည်မှာလူကောင်းတစ်ယောက်တိုးတာပေါ့။
ကြုံလို့ ရေးတဲ့လူကလဲကိုယ်မဟုတ်တဲ့အခြားလူတစ်ယောက်အကြောင်းသိချင်မယ်ထင်လို့ပါ ကျနော်ကတော့ ကောင်းတဲ့ အသိ အတတ် အလိမ္မာ သီအိုရီ အဆုံးအမ ဘယ်ကရရချက်ချင်းကိုယ်ထဲသွင်းလိုက်တယ် ချက်ချင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်။ အချို့ကိစ္စတွေမှာ သမာဓိအားနဲနေသေးလို့ချက်ချင်းမကျင့်သုံးနိုင်သေးရင်လဲ အဲဒီကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးဖို့ ခေါင်းထဲမှာရော ရင်ထဲမှာရော အဆင်သင့်ရှိတယ်။
New Yorkသွားမဲ့ခရီးမှာ LAသွားမဲ့လေယာဉ်ပေါ်တက်ပါဆိုရင်တော့ ၀မ်းနည်ပါတယ်NO။
LeaveaReply to Thar Aye Cancel reply